BWC074 - Fakan-tsarimihetsika OMG Mini maivana amin'ny vatana mitafy amin'ny famatrarana horonantsary Super - 20-25 Hrs ho an'ny 32GB [Tsy misy efijery LCD] | Vahaolana OMG
BWC074 - Fakan-tsarimihetsika OMG Mini maivana amin'ny vatana mitafy amin'ny famatrarana horonantsary Super - 20-25 Hrs ho an'ny 32GB [Tsy misy efijery LCD]
Button an-tsoratra anoloana - Ny bokotra fandraisam-peo lehibe eo anoloana dia endri-javatra tsara takian'ny mpanjifa marobe, satria mora ny mahita ny bokotra REC manomboka manomboka fandraketana, firaketana fototra iray.
10.5 ora eo ho eo ny fiainam-pivoarana feno 720P - Noho ny vahaolana H22 ambany ny fahombiazan'ny fampiasana herinaratra. Ity fitaovana ity dia mampifandanja betsaka ny fiainana sy ny haben'ny fakan-tsary. Arak'izany dia afaka mandray an-tsoratra 10.5 ora maharitra bateria fandraketana!
LCD eo an-tampony - LCD kely eo an-tampony mba hanamarihana ny fitahirizana, ny bateria, ny toe-razana an-tsoratra, GPS, WIFI
Vahaolana 1440p tena feno - 1440P fanapahan-kevitra an-tsarimihetsika 140 ambaratonga fahaiza-miaina XNUMX dia mahatonga ity Camera-Worn Camera ity ho fitaovana tsara hisamborana izay hitanao / ilainao.
WIFI - Mihoatra ny 10 metatra WIFI mandeha amin'ny alàlan'ny smartphone, afaka mandefa horonantsary na mandefa horonantsary mankany amin'ny headquarter
Fanondroana GPS - Mahavita manara-maso na mahita ny toerana tena misy ny fitaovana.
Fahitana tsy mazava infrared alina - Fandraisana an-tsoratra mandritra ny alina. Hatramin'ny 10 Meters misy sary tarehy hita maso.
Fampandrenesana horonantsary H.265 & H.264 - Ity Device ity dia mandray ny vahaolana farany Ambarella H22 miaraka amin'ny haitao H.265. H.265 dia hahatonga ny horonan-tsary fakantsary ho 50% kely kokoa noho ny horonantsary H.264
Dimension: 83mm * 56 mm * 23mm
Rakitsary iray bokotra: Tohanana ny rakitsoratra iray
Talohan'ny fandraisam-peo / Famoahana lahatsoratra: Eny
White LED: Eny
Mikrofonaly: Miorina tsara ao amin'ny mikrôfo.
Water Mark: ID, mpampiasa sy fotoana Stamp napetaka anaty horonantsary.
Sary haben'ny sary: 32 Camera megapiksel
Format sary: JPEG
Format horonantsary: H.265 sy H.264 format coding format an'ny safidy
Fahaiza-mitahiry fitahirizana: 32G (16GB / 64G / 128GB)
Sarimihetsika fitifirana mandritra ny fandraisam-peo:Eny
Kalitao horonantsary:Best / tsara kokoa / ara-dalàna
LCD Screen: Tsia
Haverina indray ny lakile: Eny
Sarin-tsary / horonantsary: Eny
Firaketana an-tsoratra: Wide Angle 140 degrees
Night Night: Hatramin'ny metaly 10 miaraka amin'ny fitazomana hita maso
Tsy tantera-drano : IP67
Clip: Mitroka metaly avo lenta miaraka amin'ny fihodinana 360 degre
Battery Type: 2800 mAH Lithium
Fotoana fiampangana: 4 ora
Fiainana batterie: 12 ora
Haavo an'ny bateria: Mpampita sary
ID tokana isa / unit: Ampidiro ID ID ny ID 5 sy 6 marika
Miaro ny tenimiafina: Mametraka tenimiafina mpandrindra hanaiky ny famafana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko. Tsy afaka mijery ireo horonantsary fotsiny ny mpampiasa fa tsy afaka mamafa izany.
Fomba fanakonana: Eny
Miasa moana: Eny
Miasa Temperature: -30 ~ 60 degre Celsius
Sivana fitahirizana: -30 ~ 60 degre Celsius
BWC074 - Fakan-tsarimihetsika OMG Mini maivana amin'ny vatana mitafy amin'ny famatrarana horonantsary Super - 20-25 Hrs ho an'ny 32GB [Tsy misy efijery LCD] no farany niova: Febroary 19th, 2021 by Admin
4672 Total Views 3 Views Today